Mandehana ao anatiny
Misoratra anarana mialoha
Rafitra fampiasam-bola ara-bola amin'ny vanim-potoana vaovao
Trading Battle Net .com dia vondrom-piarahamonina misy varotra miharihary, fanavaozana ary vaovao.
Mandehana haingana amin'ny fotoana mitady tombony
Ny fiolahana haingana
Fotoam-piadiana, tombom-bola, vola very dia azo fidina
30 minitra, fara-fahakeliny ny tombony azo tanterahina
Fametrahana automatique haingana sy rafitra fisintonana
Mankanesa amin'ny fitantanana fananana azo antoka
Ny fitantanana fananana azo antoka
Teknolojia blockchain, fitantanana ny tantara momba ny fifanakalozana
Rafitra fiarovana fiarovana lehibe
BOKY API BUKA
Mandehana any amin'izay rehetra, ry andian-tombony avo
Generation avo tombony ho an'ny rehetra
Safidy mivantana ny risika
Renivohitra kely, azo averina avo be
Renivohitra ambony, fitantanana risika ary tombony azo antoka
Mankanesa amin'ny rafi-pitondran-tena ara-drariny
Rafitra fitsangatsanganana mendrika
Manomboka eo amin'ny fepetra mitovy ihany ny rehetra
Fifaninanana manokana momba ny fahaizana manokana VS
Rafi-pitantanana teknolojia blockchain
Fotoam-bola 30 minitra! Mitombo avo roa heny ny vokatra!
Rafitra mpivarotra ara-barotra sy filaharana amin'ny fampiasana haitao blockchain, olona madio sy ny fifanakalozana fifanakalozana tsirairay
Fanavaozana paradigma ara-bola
Tontolo iainana fifampiraharahana optimum
Miaraka amin'ny interface tsara sy maotera fahita haingana
Varotra varotra sy marina
Natao tsara ho an'ny PC ary koa finday,
Varotra mora sy mora ampiasaina na aiza na aiza, na aiza na aiza
Fivarotana 30 minitra
Mihena ny fotoana hahazoana tombony
Fampitomboana ny fiverenana
Ny fitantanana risika
Mahasoa eo amin'ny tsenan'ny orsa
Asehoy ny mari-pahaizana very anao manokana
Hadisoana sy valisoa avo
Institution sy tsy manan-kery
Fifaninanana momba ny fampiasam-bolan'ny tsirairay
Dynamic tena loom toy ny lalao
Varotra ady varotra
Sehatra fampiasa vaovao momba ny fampiasam-bola mampiasa teknolojia blockchain
Varotra toy ny lalao
Fifaninanana lalina mifangaro
Kaonty Facebook ny fifanakalozana toy ny lalao
Kaonty Twitter momba ny varotra lalao tahaka ny lalao
Ny kaonty misy ny fifanakalozana toy ny lalao
Kaonty dribble amin'ny fifanakalozana lalao tahaka ny lalao
Kaonty dika mitovy amin'ny varotra lalao toa ny lalao
Mikasa ny hanome ny mpampiasa ny fahatsapana hilalao paikady lalao simulasi izahay. Amin'ny ho avy, ny tokana isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny fividianana sy fampiasana fiasa mahasoa amin'ny varotra.
Mampiasa API malalaka amin'ny fifanakalozana fifanakalozana
Kaonty Facebook an'ny API API
Kaonty Twitter an'ny API OPEN
Kaonty momba ny kaontin'ny OPEN API
Kaonty dribble an'ny API OPEN
Kaonty mifandray amin'ny OPEN API
Tsy tahaka ny serivisy fampiasam-bola simika virtoaly ankehitriny, ny serivisy miady amin'ny varotra dia mampiasa ny Open API fifanakalozana fifanakalozana cryptocurrency ary mampiasa fihenan-tena sy fandoavam-bola amin'ny fotoana tena izy.
Ny fitsipiky ny ady voafaritry ny mpampiasa
Kaonty Facebook momba ny lalao lalao maimaimpoana
Kaonty Twitter momba ny fitsipi-dalao maimaim-poana
Ny kaonty momba ny lalao lalao maimaimpoana
Kaonty Dribble momba ny fitsipi-dalao maimaim-poana
Kaonty mifandray amin'ny alàlan'ny lalao lalao maimaim-poana
Ny fitsipika rehetra momba ny ady amin'ny serivisy miady dia tapa-kevitra ny mpampiasa. Ny mpampiasa dia manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny fitsipika napetraky ny orinasa. Izahay dia hanao ady ara-barotra eo amin'ireo mpampiasa tafangona araka ny fitsipika napetraky ny mpampiasa. Tsy misy ny tsy fitovian-kevitra ny mpampiasa momba ny valiny sy ny fizarana.
Mampiasa entana amin'ny lalao
Kaonty Facebook misy mari-pahaizana TBet
Kaonty Twitter misy famantarana TBet
Kaonty momba ny mari-pahaizana TBet
Kaonty dribble misy mari-pahaizana TBet
Kaonty dika mifandray amin'ny mari-batana TBet
Ny marika isan-karazany dia takiana hamorona efitrano fiadiana, ary tambiny maromaro ny karama omena an'ireo mpikambana izay mamorona efitrano fiadiana. Lalao mini-marika isan-karazany no havoaka amin'ny serivisy fandraisana anjara amin'ny mini-lalao. Ny lalao mini dia lalao probabilistika ary hampiasa famantarana isan-karazany handray anjara.
Ny rafitra sy ny teknolojia azo itokisana
Hetsika ho mpikambana mandroso (famantarana 30 TBET)
Miangavy ho mpikambana
Varotra ny varotra farany Vaovao, Fantatra-baovao, Vaovao, Vondron'orinasa
Maherin'ny 1 ny ady varotra efa natsoratra mialoha
Ny sehatry ny ady ara-barotra momba ny varotra dia mihoatra ny 6 isanjato talohan'ny famandrihana ankehitriny 10 andro taorian'ny fampandrenesana ny hetsika tamin'ny volana jona 30 mialoha. Misaotra indray noho ny fahaliananao sy ny fitiavanao. Hanao izay azonay atao izahay hampisehoana aminao serivisy milamina sy tsara kokoa hamerenanao ny tombotsoanao. Misaotra anao indray. Mpiasa amin'ny sehatry ny ady ara-barotra rehetra.
Lahatsary TET momba ny TBET
Topim-pomba momba an'i TBET Token Salama, ity ny Trading Trading. Ny varotra ady dia sehatra iray ho an'ny mpampiasa mametraka fitsipika momba ny ady (fotoana, loka, sns) ary hamidy marika isan-karazany amin'ny fifanakalozana lehibe mba hitarika ady ary hamaritana filaharana hahazoana fandresena loka. Androany aho te hanazava ny tokin'ny TBET. TBET Token Overview TBET Token dia cryptocurrency izay hiasa ho vola amin'ny fanaovana tetikasa ary mampiasa serivisy fiady amin'ny varotra, ary serivisy ao anatin'ny ady amin'ny varotra. Fampidirana Bebe kokoa momba ny TBET Token[...]
Fampiasana tokana TBET
Fampiasana tokana TBET dia ampiasaina amin'ny fiasa sy serivisy maro samihafa omena amin'ny ady varotra. Ankoatr'izay, ny fiasa hampiasa tokana TBET dia hitombo tsy tapaka. Ount fihenam-bidy fihenan'ny fihenan'ny varotra Ny laharan'ny serivisy ara-barotra dia mety miovaova amin'ny tahan'ny fiverenan'ny 0.01%. Ankoatr'izay, mba hahazoana tombony amin'ny fihenan'ny tsena ambany dia misy heriny lehibe ny vaomiera ambany. Ireo mpandray anjara amin'ny ady dia Fampahafantarana bebe kokoa momba ny fampiasana TBET Token[...]
Rafitra fivarotana blockchain Hanampy am-pahavitrihana ny teknolojia blockchain izahay hanatsarana ny fangaraharana ny ady varotra.Hianarantsika izay hahazoana antoka fa azo atao ny varotra rehefa vita ny baiko / mividy rehetra mandalo ny porofon'ny fifanakalozana blockchain. Mba hanomezana tolotra toy izany dia ilaina ny famolavolana rafitra blockchain mahavita porofo amin'ny fifanakalozana mivantana. Mampiasa vahaolana amin'ny blockchain avy amin'ireo orinasa manana teknolojia voaporofo ary fiarovana avo izahay mba hampandrosoana ny rafitra. Fampidirana bebe kokoa ny rafitra Tradingchain[...]
Maninona no manamboatra ady varotra amin'ny blockchain
Izahay dia manana traikefa amin'ny fampandehanana serivisy fampiasam-bola simulasi cryptocurrency alohan'ny hiomanana amin'ny tetik'ady hiady. Nanamafy ny filan'ny mpampiasa maro izahay tamin'ny alàlan'ny serivisy. Anisan'izy ireo, ny fanadihadian'ny mpampiasa indrindra sy ny sakana amin'ny serivisy dia ny fanamarinana ny fangaraharana ny fanaovana 'sy ny filaharana'. Nanapa-kevitra izahay fa hanararaotra ny haitao KwonTrect hendry blockchain hanitarana bebe kokoa ny serivisy voaporofo. Ankoatr'izay, maro amin'ireo serivisy efa misy no tsy maintsy tantanan'ny mpandraharaha mihitsy. Fampidirana Misy antony bebe kokoa hananganana ady amin'ny varotra amin'ny Blockchain[...]
Vokatry ny tombony lehibe na dia misy vola kely aza
〉 Manome serivisy ahazoana tombom-barotra amin'ny fahaiza-manao varotra, tsy vola kely ahazoana vola azo, na dia misy vola kely aza. Ao amin'ny fifanakalozana efa misy, 0.1ETH dia azo arotsaka hahatratra 100% vokatra, fa 0.2ETH ihany no mahazo. Saingy, amin'ny alàlan'ny serivisy hiady amin'ny varotra, afaka mametraka 0.1 ETH ianao ary mahazo 1.0 ETH amin'ny ady iray. Service serivisy serivisy mahatsapa tombony indray mandeha amin'ny ady avy amin'ny fampiasam-bola izay miandry fiakarana aorian'ny fampiasam-bola ihany Fampidirana Misy famoronana tombony bebe kokoa miaraka amin'ny famatsiam-bola kely[...]
Varotra tolotra miady amin'ny varotra
Tanjony ny hanome serivisy ady amin'ny raharaham-barotra ahafahana mamerina ny fampiasam-bola lehibe na dia any an-drenivohitra kely aza. Ny serivisy momba ny fifanakalozana ara-barotra Cryptocurrency dia mamaha ny olana momba ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny fananganana serivisy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny API API malalaka amin'ny fifanakalozana fifanakalozana betsaka. Ao amin'ny serivisinay, ny fahafaha-varotra mpampiasa dia ny zava-dehibe indrindra. Ny mpampiasa rehetra dia miditra ao amin'ny efitrano fiadiana tiany ary mifaninana amin'ny fifanakalozana ara-barotra miaraka amin'ny fananana asa mitovy. Fampidirana bebe kokoa momba ny varotra ady amin'ny varotra[...]
Ahoana ny fomba hirotsaka amin'ny ady tsotra & lalao mini Ny olana amin'ny filokana
Community Q. Ahoana no hanaovana filokana amin'ny ady tsotra & lalao mini mety ho olana eo aoriana amin'ny filokana ?? Tale Jeneraliny: Namerina nijery ny raharaha ara-dalàna sy ny votoatin'ny famotopotorana izahay, ary ny FX sy ny kilalao hafa dia miteraka olana satria valim-panararaotana izy ireo. . Community Q. Raha olona mahay varotra ianao dia afaka mampiasa ny sisiny Fampahafantarana bebe kokoa Ny fomba hijerena vola amin'ny ady tsotra sy lalao mini[...]
Misy ve ny fifanakalozana fifanakalozana mikendry ny lisitra amin'ny 2020?
Misy ve ny fifanakalozana fifanakalozana mikendry ny lisitra amin'ny 2020? CEO: Manome serivisy bot isika amin'ny fifanakalozana fifanakalozana cryptocurrency ary mifandray amin'ireo manamboninahitra fifanakalozana. Na izany aza, rehefa niomana nandritra ny fotoana ela isika, dia miomana amin'ny lisitra voalohany amin'ny fifanakalozana fifanakalozana, koa raha te-hanamarina ny lisitry ny ho avy ianao, dia tongava mba ho tonga ao amin'ny efitranonay Telegram mialoha raha hijery ny tena fotoana. Ary ity tetik'asa ity dia kendrena amin'ny serivisy maneran-tany fa tsy serivisy Koreana. Fampidiran-dresaka Misy ve ny fifanakalozana fifanakalozana drafitra amin'ny lisitra 2020?[...]
Azoko atao ve ny mandray anjara amin'ny fifaninanana marobe amin'ny fotoana mitovy?
Q. Afaka mamorona efitrano maro ve aho ary handray anjara amin'ny fifaninanana marobe amin'ny fotoana mitovy? CEO: Izay misy mpampiasa afaka mamorona efitrano fiadiana maro ary mandray anjara amin'ny efitrano fiadiana. Ny drafitra ankehitriny dia mikasa ny isan'ny mpandray anjara miisa 10. Mikasa ny hanitsiana ny faritry ny fandraisana anjara izahay raha mijery ny filan'ny mpampiasa sy ny toe-draharaha fandraisana anjara. Fizarana Q&A Community Q. Raha mijery ny taratasy fotsy ianao. Fampidirana bebe kokoa Azoko atao ve ny mandray anjara amin'ny fifaninanana marobe amin'ny fotoana mitovy?[...]
Mpampiasa marobe ihany no ho afaka hiady varotra
Mpampiasa maro ihany no afaka hiady varotra Q. Inona avy ireo tombony azon'ny mpampiasa? Ankoatr'izay, toa hita fa betsaka ny mpampiasa ho afaka hanao ady ara-barotra, saingy liana amin'ny hetsika manokana sy ny drafi-barotra amin'ny ho avy aho. Tale Jeneralin'ny CEO: Betsaka ny fanontaniana maro voarain'ny fiaraha-miasa amin'ny hetsika PR sy marketing any Korea sy any ivelany. Mikasa ny hiara-hiasa am-pahavitrihana amin'ireo mpivarotra mifandray izahay, ary hikarakara sary amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fampiantranoana fifaninanana varotra izay mandeha tsy tapaka. Ny fampidirana mpampiasa bebe kokoa mba hanana ady ara-barotra amin'ny mpampiasa maro[...]
Fividianana sy ampiasao mari-pamantarana TBET ary fihenam-bidy
Q. Ho an'ny ady ara-barotra, amboary ny fotoana sy ny loka, ary mividy entana miaraka amina vidiny miaraka amin'ny tokotanin'ny TBET.Izany koa no ampiasaina amin'ny famoronana efitrano fiadiana, ary inona no mampiavaka azy amin'ny serivisy fampiasam-bola simika virtoaly misy? Araka ny hevitrao, inona no antony ampiasana ny serivisy amin'ny ady ara-barotra sy ny tombontsoa (miverina, sns) dia azonao!? CEO: Azoko tsara fa ny tanjona sy ny tombontsoa amin'ny fampiasana fampiasam-bola virtoaly dia samihafa. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fampiasana ady ara-barotra dia fifanakalozana varotra nomerika Ampidiro ny Taratasy TBET misimisy kokoa, ny fihenam-bidy ampiasaina amin'ny fividianana[...]
Serivisy miady amin'ny ady amin'ny fomba izay hahazoana vola amin'ny fahaiza-manao varotra madio
Q. Raha mamaky ilay taratasy fotsy ianao, ireo tokana TBET dia voalaza fa hampihena ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny serivisy ady amin'ny alàlan'ny tolotra amin'ny alàlan'ny tombony amin'ny fahaiza-manao varotra, fa tsy amin'ny fantsom-bola amin'ny famatsiam-bola. Mahazo 0.1 ETH ao anatiny ianao, nefa ny tokin'ny TBET dia milaza fa na dia mampiasa ny 100 ETH iray aza ianao dia afaka mahazo 2 ETH amin'ny ady iray. Etsy an-tany, toa mitovy amin'ny varotra margin izy io, fa ny fahasamihafana eo amin'ny varotra margin sy ny serivisy ara-barotra amin'ny tokin'ny TBET Fampidirana serivisy amin'ny ady ara-barotra bebe kokoa amin'ny fomba izay mahazo vola amin'ny fahaiza-manao varotra madio[...]
Ilaina ny famoronana efitrano fiadiana amin'ny ady
Q. Fantatra fa raha takiana ny famoronana efitrano fivarotana, ary ny isan'ireo mpandray anjara tsy mandray anjara amin'ny efitrano fiadiana noforonina dia tsy averina ny tokana TBET izay ampiasaina amin'ny famoronana miaraka amin'ny famafana ny efitrano fiadiana. Raha misy izany dia inona ny isan'ny kely indrindra ilaina amin'ny olona ary inona no fomba sasany hampiroboroboana ny efitranon'ny fiadiana? CEO: Ny isan'ny ambany indrindra amin'ny olona hanomboka ny ady, ao ny mpitarika Fampidirana bebe kokoa ny ady varotra dia mila mamorona efitrano fiadiana.[...]
Inona no tohin'ny fitohizan'ireo marika TBET?
Q. Araka ny fijerin'ny mpampiasa vola, tiako ny hampitombo ny lanjan'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fampandrosoana maharitra. Momba ny ady ara-barotra, manontany tena aho raha hetsika vetivety io. Inona ny fotoana ifotony? Ny hetsika mifandraika amin'ny fifanakalozana dia atao amin'ny fifanakalozana samy hafa. Omena tambin-karama koa ny vola madinika natolotry ny fifanakalozana. Inona no tsy itovizany? Tale Jeneraliny: Hatreto dia tolotra telo no ampiasaina amin'ny fampiasana tokana TBET eny amin'ny lampihazo. Amin'ny endriny izay andevonan'ny tsirairay ny TBET tsy tapaka Fampidirana bebe kokoa Inona ny tohin'ny fitohizan'ireo mari-batana TBET?[...]
Ahoana no ampiasana tokana TBET?
Q. Ahoana no ampiasana tokana TBET? Inona no mampiavaka ilay sehatra efa misy? CEO: TBET Token dia cryptocurrency izay tompon'andraikitra amin'ny fiasan'ny vola amin'ny fanatanterahana tetikasa ary ny fampiasana serivisy ady amin'ny fifanakalozana. Ireo tokana TBET dia sambany, fihenam-bidy amin'ny saram-piadiana varotra. Ny laharam-pitantanan'ny serivisy miady amin'ny fifanakalozana dia mety miovaova na dia vokatra 0.01% aza ny vokatra. Sokajy ambany ihany koa Fampahafantarana bebe kokoa Ahoana ny fampiasana ny mari-pahaizana TBET?[...]
Inona ny atao hoe Platform de la Trading?
Q. Inona ny varotra Platform de la Trading? Toa toy ny sehatra tsy mahazatra, fa azafady hazavao amin'ny an-tsipiriany. CEO: Trading Battle dia sehatra fifanakalozana ara-barotra izay manambatra ny singa amin'ny'Battle 'amin'ny fifanakalozana varotra nomerika. Ny mpampiasa dia mandray anjara amin'ny efitrano fiadiana miaraka amin'ny vidin'ny fandraisana anjara (ETH) ao anatin'ny lampihazo ary mifanakalo amin'ny fotoana mitovy sy ny vola, ary avy eo ny 50% amin'ireo mpampiasa avo lenta dia mizara ny vidin'ny fandraisana anjara (ETH). Miaraka amin'ny rafi-piadiana toy izany, ny mpampiasa dia afaka mifanakalo varotra mihoatra ny varotra mampiasa ny fifanakalozana efa misy. Fampahafantarana bebe kokoa Inona ny varotra Platform Trading?[...]
Fampidirana tetik'asa fiady amin'ny varotra
Q. Mba ampidiro vetivety ny tenanao sy ny tetikasanao. CEO: Salama. Ity dia Suwon Kim, CEO ny Trading Battle Project. Raha hampahafantatra vetivety ny tenako dia talen'ny fitantanana ny AviBot, izay mpikambana iray amin'ny serivisy ara-barotra automatisant an'i Bithumb, ary nandroso ny teknolojia API natolotry ny fifanakalozana amin'ny fanehoana ny tetikasa ankehitriny. Manome voninahitra ahy ny afaka mampiditra ny tetikasa voalohany avy amin'ny Shrimp Fishing boat. Ny tetik'asanay dia tsy hoe fotsiny fivarotana sy fividianana amin'ny tsenan'ny cryptocurrency, fa koa amin'ny fifanakalozana varotra nomerika. Teny fampidirana bebe kokoa momba ny varotra tetik'ady[...]
Zerif Lite developer: ThemeIsle